Hlala Ubukele Kumncintiswano Wakho We-inthanethi noRivalfox | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 14, 2015 NgoLwesihlanu, Mashi 13, 2015 Douglas Karr
I-Rivalfox iqoqa idatha kusuka emithonjeni ehlukahlukene koqhudelana nabo futhi yenza idatha ifinyeleleke kalula kusuka kuhabhu yedatha yomncintiswano eyodwa. Imithombo ifaka ithrafikhi, usesho, iwebhusayithi, incwadi yezindaba, imithombo yezindaba, ezenhlalo kanye nabantu ngisho nezinguquko zomsebenzi.
I-Rivalfox yisixazululo se-SaaS esibeka ukuhlakanipha kokuncintisana okusika ezandleni zakho. Sikholwa ukuthi ngokufunda kwabancintisana nabo, ungakhula ngokushesha, ugweme amaphutha futhi uthole inzuzo. NgeRivalfox, izinkampani zabo bonke osayizi zingasebenzisa amandla obuhlakani bokuncintisana futhi zenze amasu aqinile aqhutshwa yidatha.
Ipulatifomu ye-Rivalfox Competitive Intelligence Ifaka
Ukuqapha Ukushintsha Iwebhusayithi - Gada amawebhusayithi esincintisana nawo bese uthola izexwayiso ngokushesha lapho kwenzeka ushintsho. I-Rivalfox igqamisa izibuyekezo, kuye emininingwaneni emincane, ukukwazisa ngokushintsha kwamasu amancane kakhulu. Nge-Website Cropper yabo, ungahlunga ngisho nomsindo futhi ugxile kuphela ezindaweni zekhasi ezibalulekile kuwe.
Ukuqapha kwe-Online Press - Qoqa izindaba, izindatshana nokukhulunywa ngakho kuyo yonke imithombo emikhulu yezindaba bese uziveza ngokuzenzekelayo kudeshibhodi yakho nemibiko yansuku zonke. Landela ngomkhondo lokho okushiwo oncintisana naye, ngobuningi nangemithombo yezindaba, bese ubeka ibhentshimakhi ngokwakho. Ungenza ngokwezifiso amagama afinyelela kwayisihlanu ahlukene
umncintiswano ngamunye wokumbozwa okukhulu nokunemba.
Ukuqapha Kwethrafikhi Nokusesha - Gada ithrafikhi yakho bese uyiqhathanisa neyabancintisana nabo, uqokomise ama-KPIs abaluleke kakhulu: ukuvakashelwa okuhlukile, ukubukwa kwamakhasi ngomsebenzisi ngamunye, isikhundla somgwaqo womhlaba wonke nokuningi. Thola ukuqonda okuphelele kwethrafikhi yabo ukulinganisa izinombolo zokuthengisa nokukala umthelela wemikhankaso yokukhangisa. Qhathanisa izinombolo zabo nezakho ukucubungula isu lakho lomgwaqo. Kuhlanganisiwe yizinga lomhlaba wonke, isilinganiso sethrafikhi, ukubukwa kwamakhasi ngomsebenzisi ngamunye, izixhumanisi ezingenayo, isilinganiso sokusebenza kwe-Google, isilinganiso sokubaluleka kwewebhusayithi, izivakashi ezilinganiselwayo, isikhathi esizeni, isilinganiso sebhayisikili, imithombo yethrafikhi, ithrafikhi yokusesha, amagama asemqoka akhokhelwayo.
Ukuqapha Imidiya Yezenhlalo - Gada amanethiwekhi amahlanu aphezulu wokuxhumana nabantu athumela izivakashi kuwebhusayithi yalomncintiswano. Bheka ukuzibandakanya futhi ulandele kukho konke okuqukethwe kwabo okwabiwe.
Ukuqapha kwe-Blog nokuqukethwe - Thola okuqukethwe okuphumelele kakhulu kwezincintisana nabo bese uthola lapho bethola khona amasheya omphakathi. Sebenzisa idatha yabo ukwenza isu lakho lokuqukethwe uzuze izethameli eziqotho.
Ukumaketha nge-imeyili kanye nezindaba - Amandla okulandela umkhondo wezindaba ukuze ubone ukuthi izimbangi zakho zizama ukuhlanganyela ini nomphakathi wazo, nokuthi ziwabelana kangaki
Tags: izimbangi uqaphileUkuqapha Ibhulogiizexwayiso zokuncintisanaukuqapha i-imeyili okuncintisanaucwaningo lokuncintisanaIsilinganiso Sokuncintisanaukuqapha i-imeyiliukubika nge-imeyiliqapha izimbangiIzindaba kanye negama elingukhiye MonitoringphindokuhleRivaliqsaasUkuqapha Ulwazi kwe-SEOukuqapha ezokuxhumisoftware njengensizakaloumagazineUkuqapha Ulwazi LweTrafficUkuqapha Ukuguqulwa Kwekhasi Lewebhu